Voaroba ny volabe tao an-trano… : maty norasarasain’ny jiolahy ilay vehivavy | NewsMada
Voaroba ny volabe tao an-trano… : maty norasarasain’ny jiolahy ilay vehivavy
Tsy mifidy ora intsony ny jiolahy. Voatafika tamin’ny andro antoandro ity tokantrano iray eny Ambavahaditokana Itaosy ity. Maty novonoin’ireo jiolahy tamin’izany ny renim-pianakaviana tao an-trano ary norobainy ny vola. Mandry an-driran’antsy ny mponina, na andro na alina. Tsy milamina ny tany.
Sady norobaina no novonoina ilay renim-pianakaviana ! Ny talata tolakandro, tokony ho tamin’ny 3 ora teo, nisy jiolahy niditra tao amin’ny trano fonenan’ity vehivavy ity, eny Ambavahaditokana, Itaosy. Tsy nisy nahatsikaritra izany ny olona teny amin’ny manodidina ka nanjaka tamin’ny asa ratsiny ireo jiolahy. Ity renim-pianakaviana niharam-boina ity irery rahateo no tao an-trano tamin’io fotoana io. Norasarasain’ireo olon-dratsy izy io tamin’ny namonoany azy. Noraofin-dry zalahy koa ny volabe antapitrisany tao an-trano. Ny harivan’io andro io tokony ho tamin’ny 7 ora vao hitan’ny zanany izy, izay efa tsy misy aina intsony ary feno ratra tanteraka ny tavany sy ny lohany. Izay vao nahare ny manodidina ary niezaka nijery ny zava-nitranga, araka ny fanazavan’ny mpiray vodirindrina aminy.
Tsy fantatra, hatreto, ireo nahavanon-doza, satria novonoin-dry zalahy ilay tokony ho vavolombelona niatrika azy, ny mponina manodidina ny trano nisehoan’ny fanafihana koa, tsy nahatsikaritra izay olona niditra sy nivoaka tao an-trano. Ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana, araka izany, no hahalalana izay nahavanona izao vonoan’olona mahatsiravina izao. Polisy rahateo ny vadin’ity renim-pianakaviana maty ity.
Niteraka resabe teo an-tanàna
Samy nanana ny filazany ny olona monina eny Ambavahaditokana momba ity tranga ity. Ao ireo milaza fa lonilony sy kakay no anton’izao famonoana sy fandrobana izao. Ny hafa indray mametraka fa fanafihana toy ny fanafihana ihany iny, saingy olona mahafantatra tsara ireo niharam-boina ny ao ambadika. Hatrany anaty taxi-be miainga eny Ambavahaditokana, saika io vono olona io ny ambentin-dresaky ny mpandeha, omaly. « Ny toy izao mihitsy no ilana ny fitsaram-bahoaka amin’ny jiolahy tratra », hoy ny raim-pianakaviana iray. An’ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana anefa ny teny farany ka miandry ny tohiny ny rehetra.
Marihina fa izao indray vao nisehoana fanafihana narahina vono olona toy izao ny eny Ambavahaditokana. Ny taona 2012 no nisy tranga farany niseho, izay ny mpiambina ny tanàna ihany ny tompon’antoka tamin’ny famonoana ny olona tao an-trano.
Manjaka, tato ho ato, ny tsy fandriampahalemana. Tsy misy fitonian-tsaina ho an’ny vahoaka fa mandry an-driran’antsy, na andro na alina. Mila ny fandraisana andraikitry ny tomponandraikitra izany. Mampahazo vahana ny tsy filaminana rahateo ny fahalemen’ny fitondrana.